Mauricio Pochettino Oo Ka Hadlay Go'anka PSG Ee Ku Aadan Mustaqbalka Kylian Mbappe
HomeWararka CiyaarahaMauricio Pochettino oo ka hadlay go’anka PSG ee ku aadan Mustaqbalka Kylian Mbappe
Mauricio Pochettino oo ka hadlay go’anka PSG ee ku aadan Mustaqbalka Kylian Mbappe
October 15, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Suuqa kala iibsiga 0
Mauricio Pochettino ayaa ka hadlay fursadaha Paris Saint-Germain ee ah inay awoodaan inay sii haystaan ​​adeega Kylian Mbappe .
Ciyaaryahanka ku guuleystay Koobka Adduunka ayaa kaliya waxaa ka harsan qandaraaskiisa siddeed bilood iyo bar, taasoo ka dhigeysa inay suurtogal tahay in weeraryahanku uu wadahadalo la yeesho kooxaha shisheeye bisha Janaayo.
Real Madrid , oo ku guuldarreysatay dalabyo badan oo lacag badan ah oo ay ku dooneysay Mbappe ayaa wada xaajoodkiisa bilaabaeysa bilowga 2022 haddii xaaladdu aysan is beddelin.
Si kastaba ha ahaatee, Pochettino ayaa dareensan in 22 jirkaan uu awood u leeyahay inuu ka dhabeeyo hamigiisa Parc des Princes sanadaha soo socda.
Wareysi uu siiyay COPE iyo Radio Marca , macalinka reer Argentine ayaa yiri: “Mbappe wuu fiican yahay, waa wiil deggan oo leh shaqsiyad iyo dabeecad aad u bulsho badan, wuxuuna jecel yahay kubadda cagta.
“Kylian ayaa gaari doona go’aanka ay tahay inuu qaato, kooxduna waxay sameyn doontaa wax walba oo suurtogal ah si ay u ceshato.
Mbappe ayaa ku riyaaqay bilowga xooggan ee xilli ciyaareedkan, isagoo gacan ka geystay afar gool iyo shan caawin 11 kulan oo uu u saftay Ligue 1 iyo Champions League.